ခြေထောက်နှစ်ဖက်လုံးဆုံးရှုံးခဲ့ပေမယ့် ဘ၀ကိုအရှုံးမပေးခဲ့တဲ့အကဆရာမလေး…ဖြစ်သွားပုံက ဒီလိုပါ.. - Tameelay
ခြေထောက်နှစ်ဖက်လုံးဆုံးရှုံးခဲ့ပေမယ့် ဘ၀ကိုအရှုံးမပေးခဲ့တဲ့အကဆရာမလေး…ဖြစ်သွားပုံက ဒီလိုပါ..
Liao Zhi အမည်ရှိတဲ့ တရုတ်ပြည်က အကဆရာမတစ်ယောက်အတွက်တော့ ၂၀၀၈ခုနှစ်ဟာအဆိုးရွားဆုံးနှစ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၈ခုနှစ် လူအသေအပျောက်များပြားခဲ့တဲ့ စီချွမ်ငလျင်မှာ သူမရဲ့ခြေထောက်နှစ်ဖက်အပြင် ယောက္ခမဖြစ်သူနဲ့ သမီးလေးကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။
Liao Chi ဟာတရုတ်ပြည် စီချွမ်ပြည်နယ်က အကဆရာမတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ယောက်ျားဖြစ်သူ၊ သမီးဖြစ်သူတို့နဲ့အတူနေထိုင်ပါတယ်။ ငလျင်မတိုင်မီတုန်းကတော့ သူမရဲ့ ၁၀လအရွယ်သမီးလေးနဲ့အတူ ၀ါသနာပါတဲ့ အကပညာရပ်နဲ့အသက်မွေးရင်း ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့တဲ့ဘ၀လေးရခဲ့ပါတယ်။
ငလျင်ကြီးဖြစ်သွားတဲ့အခါ သူမရဲ့မိသားစုဝင်တွေက တိုက်ခန်းအထပ်သုံးလွှာလောက်အနက်ရှိတဲ့ မြေအောက်ထဲရောက်သွားခဲ့ပြီး သူမရဲ့ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကတော့ အပျက်အစီးတွေကြားထဲမှာ ပိတ်မိနေခဲ့ပါတယ်။
Liao ရဲ့ဖခင်က ရွံ့ထဲမှာပိတ်မိနေပြီး မြေအောက်ထဲရောက်နေတဲ့သူမကို တခြားကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေနဲ့အတူ အသည်းအသန်ကယ်ဆယ်ခဲ့ရပါတယ်။ ယောက်ျားဖြစ်သူကလည်း ခြေထောက်အဖြတ်ခံလိုက်ရပြီး စိတ်အားငယ်နေတဲ့ဇနီးကို ဖေးမပေးရမယ့်အစား သူမကိုထားပြီးထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် Liao က သူမဘ၀ကိုအရှုံးမပေးခဲ့ပါဘူး။ အကပညာရပ်ကို ပြန်လည်လေ့လာလိုက်စားခဲ့ရုံတင်မကပဲ ၂၀၁၃တရုတ်ပြည်မှာကျင်းပတဲ့ Dance out My Life CCTV show အတွင်း ဒါဇင်ပေါင်းများစွာသော ယှဉ်ပြိုင်ဖျော်ဖြေသူတွေထဲကနေ သူမနဲ့ တွဲဖက်ကပြဖျော်ဖြေသူအမျိုးသားဟာ ဒုတိယဆုရရှိခဲ့ပါတယ်။
၅နှစ်ကြာတဲ့အခါမှာတော့ နောက်ထပ်ငလျင်တစ်ခုဟာ တရုတ်ပြည်ကို ထပ်မံရိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ Liao ဟာ ငလျင်ဒဏ်ခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခသည်တွေဆီသွားပြီး လုပ်အားပေးအနေနဲ့ကူညီခဲ့ပါတယ်။ သူမရဲ့ခြေထောက်အတုတွေကို အသုံးပြုရင်းနဲ့ပဲ သွားရောက်ကူညီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
သူမအိမ်ထောင်ကွဲပြီးလို့ နှစ်အနည်းငယ်ကြာတဲ့အခါမှာ Liao ဟာသူမကိုအမှန်တကယ်ချစ်မြတ်နိုးတဲ့အမျိုးသားနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး အိမ်ထောင်ပြုခဲ့ပါတယ်။ ခြေထောက်နှစ်ဖက်လုံး ဆုံးရှုံးခဲ့ပေမယ့် ဘ၀ကိုကြံ့ကြံ့ခံကာ စိတ်အားထက်ထက်သန်သန်နဲ့သူမလုပ်စရာ ရှိတဲ့ကိစ္စတွေကို လုပ်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့ Liao ဟာ ချီးကျူးထိုက်သူအမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့အကြောင်း Viral4real အွန်လိုင်းသတင်းစာမျက်နှာမှာတွေ့ရှိရပါတယ်။
Liao Zhi အမညျရှိတဲ့ တရုတျပွညျက အကဆရာမတဈယောကျအတှကျတော့ ၂၀၀၈ခုနှဈဟာအဆိုးရှားဆုံးနှဈဖွဈခဲ့ပါတယျ။ ၂၀၀၈ခုနှဈ လူအသအေပြောကျမြားပွားခဲ့တဲ့ စီခြှမျငလငျြမှာ သူမရဲ့ခွထေောကျနှဈဖကျအပွငျ ယောက်ခမဖွဈသူနဲ့ သမီးလေးကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယျ။
Liao Chi ဟာတရုတျပွညျ စီခြှမျပွညျနယျက အကဆရာမတဈယောကျဖွဈပွီး ယောကျြားဖွဈသူ၊ သမီးဖွဈသူတို့နဲ့အတူနထေိုငျပါတယျ။ ငလငျြမတိုငျမီတုနျးကတော့ သူမရဲ့ ၁၀လအရှယျသမီးလေးနဲ့အတူ ၀ါသနာပါတဲ့ အကပညာရပျနဲ့အသကျမှေးရငျး ပြျောရှငျခမျြးမွတေဲ့ဘဝလေးရခဲ့ပါတယျ။
ငလငျြကွီးဖွဈသှားတဲ့အခါ သူမရဲ့မိသားစုဝငျတှကေ တိုကျခနျးအထပျသုံးလှာလောကျအနကျရှိတဲ့ မွအေောကျထဲရောကျသှားခဲ့ပွီး သူမရဲ့ခွထေောကျနှဈခြောငျးကတော့ အပကျြအစီးတှကွေားထဲမှာ ပိတျမိနခေဲ့ပါတယျ။
Liao ရဲ့ဖခငျက ရှံ့ထဲမှာပိတျမိနပွေီး မွအေောကျထဲရောကျနတေဲ့သူမကို တခွားကယျဆယျရေးသမားတှနေဲ့အတူ အသညျးအသနျကယျဆယျခဲ့ရပါတယျ။ ယောကျြားဖွဈသူကလညျး ခွထေောကျအဖွတျခံလိုကျရပွီး စိတျအားငယျနတေဲ့ဇနီးကို ဖေးမပေးရမယျ့အစား သူမကိုထားပွီးထှကျသှားခဲ့ပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ Liao က သူမဘဝကိုအရှုံးမပေးခဲ့ပါဘူး။ အကပညာရပျကို ပွနျလညျလလေ့ာလိုကျစားခဲ့ရုံတငျမကပဲ ၂၀၁၃တရုတျပွညျမှာကငျြးပတဲ့ Dance out My Life CCTV show အတှငျး ဒါဇငျပေါငျးမြားစှာသော ယှဉျပွိုငျဖြျောဖွသေူတှထေဲကနေ သူမနဲ့ တှဲဖကျကပွဖြျောဖွသေူအမြိုးသားဟာ ဒုတိယဆုရရှိခဲ့ပါတယျ။
၅နှဈကွာတဲ့အခါမှာတော့ နောကျထပျငလငျြတဈခုဟာ တရုတျပွညျကို ထပျမံရိုကျခတျခဲ့ပါတယျ။ Liao ဟာ ငလငျြဒဏျခံစားနရေတဲ့ဒုက်ခသညျတှဆေီသှားပွီး လုပျအားပေးအနနေဲ့ကူညီခဲ့ပါတယျ။ သူမရဲ့ခွထေောကျအတုတှကေို အသုံးပွုရငျးနဲ့ပဲ သှားရောကျကူညီခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
သူမအိမျထောငျကှဲပွီးလို့ နှဈအနညျးငယျကွာတဲ့အခါမှာ Liao ဟာသူမကိုအမှနျတကယျခဈြမွတျနိုးတဲ့အမြိုးသားနဲ့ တှဆေုံ့ခဲ့ပွီး အိမျထောငျပွုခဲ့ပါတယျ။ ခွထေောကျနှဈဖကျလုံး ဆုံးရှုံးခဲ့ပမေယျ့ ဘဝကိုကွံ့ကွံ့ခံကာ စိတျအားထကျထကျသနျသနျနဲ့သူမလုပျစရာ ရှိတဲ့ကိစ်စတှကေို လုပျပွနိုငျခဲ့တဲ့ Liao ဟာ ခြီးကြူးထိုကျသူအမြိုးသမီးဖွဈတဲ့အကွောငျး Viral4real အှနျလိုငျးသတငျးစာမကျြနှာမှာတှရှေိ့ရပါတယျ။
ကြက်သွန်နီ စားသုံးခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများ
ကြက်သွန်နီဟာ အိမ်တိုင်းမှာ မရှိမဖြစ် လိုအပ်တဲ့ အသီးအနှံဆိုရင် မမှားပါဘူး။ ဟိုတလောက ကြက်သွန်နီတွေ ဈေးတွေတက်ကုန်တော့ အိမ်ရှင်မတွေ ရင်တမမနဲ့ ဈေးဝယ်ခဲ့ရတာကို မှတ်မိကြဦးမှာပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကြက်သွန်နီဟာ မြန်မာမိသားစုတိုင်း အတွက် မပါမဖြစ်တဲ့ အရာ ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ ကြက်သွန်နီက မျက်ရည်ကျစေပေမယ့် အရသာကတော့ အတော်ကောင်းလို့ ဆိုရပါမယ်။ …
” ယောကျာ်းလေးအတော်တော်များက မိန်းခလေးတစ်ယောက်ကို ရွေးချယ်တော့မယ်ဆိုရင် ပထမဆုံး အလှကို ပြည့်လေ့ရှိကြတယ်။ ပြီးမှ ကျန်တဲ့အချက်လတ်တွေကို ကြည့်ကြတယ်။ “မိန်းခလေးတွေက ယောကျာ်းတစ်ယောကို ကြည့်တော့မယ်ဆိုရင် ငွေရေး ကျေးရေး နဲ့ အလုပ်ကို ကြည့်ကြတယ်။ နောက်မှ တခြားဟာတွေ ကြည့်ကြတယ်။ နှစ်မျိုးစလုံးက မမှားကြပါဘူး…. ယောကျာ်းလေးလည်း သူချစ်ဖို့ …
အိပ်ပျော် နေရာမှ တစ်ခုခုကြောင့် ရုတ်တရက် ထလိုက်ခြင်းဟာ ဘယ်လောက်ကြောက်စရာကောင်းလဲ ဆိုတာ…
အိပ်ပျော် နေရာမှ ရုတ်တရက် ထလိုက်ခြင်းဟာ ဘယ်လောက်ကြောက်စရာကောင်းလဲ ဆိုတာ… (အိပ်ယာအထမှာလိုက်နာစရာ) အိပ်ပျော်နေပြီးမှ ရုတ်တရက် ထလိုက်ခြင်းဟာ လူကိုသေစေနိုင်တယ်ဆိုတာ (အိပ်ယာအထမှာလိုက်နာစရာ) အိပ်နေရင်းဘာလို့ သေကြတာလဲ? အားလုံး အတွက်​ အ​ရေးကြီးလို့ မိတ်​​ဆွေ ဆရာဝန်​တစ်​​ယောက်​ ​ပြောပြထားတဲ့ ​ဟောဒီအချက်​​လေးကို သတိထားကြဖို့ မျှဝေပါရ​စေ။ ည ည …